KINGS Online Learning Resources | Kings International School
KINGS Online Learning Resources
Due to physical closure of classes, we have been planning hard and training hard to move our resources online. Our team have been preparing hard to deliver lessons through various online platforms and deliver activities that our little KINGS can do at home.
We will be utilising the following technology platforms in preschools to primary and secondary year groups. Preschool and Primary: Class Dojo, Tapestry, YouTube, Viber and ZOOM. Secondary: Google Classroom, Viber and ZOOM.
We are going throughadifficult and uncertain period, socially and economically asacommunity and as the citizens of the world. We are trying our best for our students to get the best possible support and education in such challenging times. Thank you to all of KINGS parents and students for your support and patience.
In addition to our move to online learning platforms starting from Monday 23rd March 2020, we have compiled below resource list / activity ideas and websites for our KINGS parents as well as for any other parents to use while schools are closed.
Children naturally have lots of energy and below resources will help in filling up their time with meaningful activities and learning opportunities. We hope you find this resource (website, activity ideas, virtual tours) useful and hope this helps in keeping the little ones occupied. Please kindly Click this Link https://bit.ly/kisonline to download the compiled list. Thank you very much.
လက်ရှိအချိန်မှာ စာသင်ခန်းများပိတ်ထားသော်လည်း ကျွန်တော်တို့ KINGS များအတွက် ကျောင်းသင်ခန်းစာများကို အွန်လိုင်းပေါ်တွင် အခက်အခဲမရှိ ကူးပြောင်း သင်ကြားရန် စီစဉ်လျက်ရှိပါတယ်။ KINGS မှ ဆရာဆရာမများသည် အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းအမျိုးမျိုးမှ တစ်ဆင့် ကျောင်းသင်ခန်းစာများ သင်ကြားပို့ချရန်နှင့် KINGS လေးများ အိမ်တွင်ပြုလုပ်နိုင်သည့် Activities များကို ပေးပို့နိုင်ရန် စီစဉ်ကြိုးစားနေပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ KINGSမှ မူကြို၊ မူလတန်းနှင့် အလယ်တန်းများကို သင်ကြားပေးရန် အောက်ပါ နည်းပညာ ပလက်ဖောင်းများကို အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ မူကြိုနှင့်မူလတန်းများအတွက်: Class Dojo, Tapestry, YouTube, Viber နှင့် ZOOM ကိုအသုံးပြုပြီး အလယ်တန်းအတွက် – Google Classroom, Viber နှင့် ZOOMကို အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအချိန်ဟာ ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ မသေချာမရေရာမှုတွေ အခက်အခဲတွေကို ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ KINGSများအတွက် အကောင်းဆုံးသော အထောက်အပံ့နဲ့ ပညာရေးရရှိရန် အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးစားလျက်ရှိပါတယ်။ KINGS မိဘများနှင့်ကျောင်းသားများအားလုံးရဲ့ ပံ့ပိုးမှုနဲ့ စိတ်ရှည်သည်းခံမှုများအားလုံးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
၂၀၂၀ မတ်လ ၂၃ ရက်တနင်္လာနေ့ မှစတင်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ KINGS များအတွက် အွန်လိုင်းသင်ကြားမှုများကိုစတင်ပြီး KINGS မိဘများအတွက်သာမက အခြားမိဘများအတွက်ပါ ကျောင်းများ ပိတ်ထားစဉ် လေ့လာသင်ကြားရေးအတွက် အသုံးပြုရန် Websiteများ၊ Activity ideaများ၊ Virtual Tourများ ကို စုစည်းတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
သဘာဝအားဖြင့် သားသားမီးမီးတို့ဟာ စွမ်းအင်တွေအများကြီးရှိပြီး အမြဲတက်ကြွနေတာမို့ ဒီ သင်ခန်းစာတွေ လေ့လာမှုတွေ Activitiesတွေက သူတို့ရဲ့အချိန်တွေကို ကောင်းမွန်စွာ အသုံးချနိုင်အောင် အကူအညီပြုပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒီ Linkလေးတွေက ကောင်းကောင်းအသုံးဝင်ပြီး သားသားမီးမီးတို့ရဲ့ အချိန်တွေအလဟဿမဖြစ်ပဲ အိမ်မှာတင် အကျိုးရှိရှိ ကုန်ဆုံးသွားအောင် အလုပ်ပေးထားပါလိမ့်မယ် လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒီlink https://bit.ly/kisonline ကိုနှိပ်ပြီး Download လုပ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။
KINGS Weekly Timetable for Pre-School
KINGS Weekly Timetable for Primary
KINGS Weekly Timetable for Secondary (Term 3)